Wararkii ugu dambeeyay weerar iyo Qaraxyo ka dhacay Boosaaso – Banaadir Times
By banaadir 5th March 2021 113 No comment
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qaraxyo iyo weerar xalay lagu qaaday Xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka.
Saqdhexe xalay ayaa koox hubeysan xabsiga ku qaadeen dagaal toos ah oo ku bilowday Qaraxyo lala beegsaday Al-baabka laga galo xabsiga, waxaana intaasi ka dib dagaal toos ah uu dhexmaray ciidanka ilaalada xabsiga iyo sidoo kale kooxdii weerarka soo qaaday.
Taliyaha Booliska ee qaybta Gobolka Bari Xuseen Cali Maxamuud oo Shir jaraaid ku qabtay Xabsiga wayn “Gaalshiraha ” ayaa sheegay in lasoo afjaray weerarkii lagu qaaday xabsiga ayna jiraan maxaabiis baxsatay iyo sidoo kalena ay jiraan khasaare ka dhashay dagaalka iyo Qaraxyada.
Khasaaraha dhanka ciidanka ayuu ku sheegay in hal askari ka dhintay 2 kalena ay ka dhaawacmeen isaga oo sheegay in Kooxdii weerarka soo qaaday laga yaabo in ay firxadeen maadaama ay habeen ahayd .
Waxaa uu sheegay wali ay waddaan qiimeynta weerarka.
Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka oo farriin culus u dirtay madaxda Somalia
By banaadir 10th February 2021
By banaadir 10th May 2021
Dableey Hubeysan oo Xalay Magaalada Boosaaso ku dishay Maareeye ku xigeenkii Shirkadda Golis